Hadii Real Ay CL Qaadayso, Bandhiga CR7 & Xidiga Reer Spain Ee Gerard Moreno Oo Fariin U Diray Griezmann %
Gerard Moreno, oo ah ciyaaryahan udheela kooxda kubada cagta Espanyol ee ka dheesha horyaalka wadanka Spain, ee La Liga ayaa wuxuu fariin qiimo badan uu udiray laacibka ay isku kooxda ahaayeen jireen ee Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann, oo hada Lamberka 7aad uqaata Athletico Madrid ayaa waxaa uu ku jiraan mustaqbalkiisa shaki wayn, isagoona dhawaan cadeeyay inuu doonayo in ka hor koobka aduunka uu go’aan cad uu ka qaato mustaqbalkiisa.
Lakaiin, Moreno oo la hadlaya weerar yahankaan Faransiiska ah ayaa wuxuu yiri: “Aad ayuu uwanaagsan yahay isaga, waxaana urajeynayaa dhamaan waqtiyadiisa oo dhan wanaag badan, aniga uma quseyso hadii uu baxayo ama hadii uu sii joogo Madrid.
Dhanka kale Moreno oo sheeko ku saabsan Ronaldo soo hadal qaaday ayaa wuxuu cod dheer ku yiri: “Waxaan doonayaa inuu dalkiisa uga qeyb qaato koobka aduunka, maxaa yeelay wuxuu [hadda] sameynayaa waxyaabo aad u wanaagsan.
Ugu dambayn, Gerard Moreno oo weerarka ka dheela ayaa wuxuu ka hadlay tartanka xiisaha leh ee Champions League, kaasoo hada maraya heerkiisa Sideed dhamaadka, islamarkaana la sugayo in laga ciyaaro kulamo waa weyn oo xiiso leh.
“Waxaan rajeynayaa in koobka ay sanad ciyaareedkan ku guuleysato Real Madrid, maxaa yeelay waa ay uqalmaan inay ku guuleystaan – Sababtoo ah waxay soo dar-dareen PSG oo ah koox awood badan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.